Amathuba Okuwina i-Lotto Izimo Zokuwina I-Lotto | Amathuba Okuwina iLotto% - OnlineCasinosOnline
Ikhaya / Imihlahlandlela / amathuba okuwina i-lotto
Amathuba Okuwina i-Lotto
Sonke siyazi ukuthi kunethuba elincane kakhulu esizoke silithole ukuwina iLotto, yize amaJackpots angaphezulu kwesigidi samaRandi lilinye kubonakala lisinika isizathu esanele sokuqhubeka nokuthenga lawo mathikithi masonto onke.
Ungakhetha Ezinhlanganisela Ezingaki?
Ukubala amathuba okuwina iLotto kufanele wenze izibalo ezithile eziyisisekelo. Abadlali kufanele bakhethe izinombolo ezi-6 kwezingu-49, okusho ukuthi singakhetha noma yiyiphi inhlanganisela engu-13,983,816.
Ngenhlanhla yethu izinombolo zingavela kunoma iyiphi i-oda. Lokhu kusho ukuthi uzowina uma ukhetha izinombolo 4, 12, 21, 33, 42, 48; ngisho nalapho ziphuma njengo-12, 33, 48, 4, 21, 42. Lokhu kuyinto enhle ngoba uma kungenjalo izingqinamba zokuthola zonke izinombolo eziyisithupha bekungaba yisayensi yezinkanyezi.
Izimo Zokuwina Kwezigaba Ezahlukahlukene zeLotto
Ngakho-ke, amathuba okuthola inhlanganisela elungile yezinombolo ezi-6 angu-13, 983, 816 kokukodwa, kanti amathuba okuthola izinombolo eziyisihlanu kanye nenombolo yebhonasi ayizigidi ezi-2.3. Lokhu kusho ukuthi cishe izikhathi eziyisithupha njengokuthola zonke izinombolo eziyisithupha. Nazi izingqinamba zokuwina umklomelo ezigabeni ezahlukahlukene:
Okwesigaba sokuqala, kufanele uqondanise izinombolo eziyi-6: 1 ezigidini eziyi-14
Okwesigaba sesibili, kufanele uqondanise izinombolo ezi-5 kanye nebhonasi: 1 ezigidini ezi-2.3
Okwesigaba sesithathu, kufanele uqondanise izinombolo ezi-5: 1 ezinkulungwaneni ezingu-55
Okwesigaba sesine, kufanele uqondanise izinombolo ezi-4 kanye nebhonasi: 1 ezinkulungwaneni ezingu-22
Kwisigaba sesihlanu, kufanele uqondanise izinombolo ezi-4: 1 ku-1 ayinkulungwane
Okwesigaba sesithupha, kufanele uqondanise izinombolo ezi-3 kanye nebhonasi: 1 kokungu-800
Kwisigaba sesikhombisa, kufanele uqondanise izinombolo ezi-3: 1 ku-61
Lapho kungekho noyedwa onqoba i-jackpot, igingqika kuze kube yilapho othile eyinqoba. Umdlalo weLotto Plus awunawo ama-rollovers okusho ukuthi umklomelo uhlukaniswe phakathi kwezigaba zeLotto ezazibe nabaphumelele.